Funda izingozi zoThengiso lweeNgqungquthela | Ukwaziswa kweengozi zeFXCC
Ikhaya / malunga / 24 / 5 INKXASO / Ukwazisa Ingozi
I-Client akufanele ibandakanye nayiphi na imali-mali ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwiiMali zeMali ngaphandle kokuba eyazi kwaye iyaqonda ingozi echaphazelekayo nganye kwiiMpahla zeMali. Ngoko ke, ngaphambi kokufaka isicelo kwi-akhawunti ukuba iKlayenti kufuneka icinge ngenyameko nokuba utyalo-mali kwiCandelo leMali elithile lifanelekile ekukhanyeni kweemeko zakhe kunye nezibonelelo zemali.
Umthengi uxwayiswa ngala mngcipheko:
I Nkampani ayinako kwaye iyakwazi ukuqinisekisela inkunzi yokuqala kwipotifoliyo yeKlayenti okanye ixabiso layo naliphi na ixesha okanye nayiphi imali etyalomali kuyo nayiphi na isixhobo sezimali.
Umxhasi kufuneka aqonde ukuba, kungakhathaliseki nayiphi na inkcazelo enokuthi inikezelwe yiNkampani, ukubaluleka kwanoma yikuphi ukutshala imali kwiiMali zeMali kungahle kuguquke ukuya phezulu okanye ngaphezulu kwaye kungenokwenzeka nokuba utyalo-mali lungaba luxabiso.
I-Client kufuneka ivume ukuba ibeka ingozi enkulu yokuba nelahleko kunye nemonakalo ngenxa yokuthengwa kunye / okanye ukuthengiswa kwanoma yiyiphi iThuluzi leMali kwaye uyamkela ukuba uzimisele ukwenza le mngcipheko.
Ingcaciso yomsebenzi wangaphambilini weCandelo leMali ayiqinisekisi ngokusebenza kwayo kwangoku kunye / okanye kwikamva. Ukusetyenziswa kweedata zembali akuyiyo imbopheleleko ebophekileyo okanye ekhuselekileyo malunga nokusebenza kwexesha elizayo lweeMpahla zeMali ekuthethwa ngalo ngcaciso.
I-Client ikwacetyiswa ukuba ukuthengiselana okwenziwe ngeenkonzo zokusebenza kweNkampani inokuba yinto eqikelelweyo. Ilahleko ezinkulu zingenzeka ngexesha elifutshane, zilingana neengxowa-mali ezifakwe kwiNkampani.
Ezinye izixhobo zezeMali zingenako ukukhawuleza ngokobisi ngenxa yoko, umzekelo wokunciphisa umfuno kunye neKlayenti angenako ukuzithengisa okanye ukufumana lula ulwazi malunga nexabiso leMali yeeMali okanye ubuninzi beengozi ezinxulumene nazo.
Xa iArhente yeMali ithengiswa ngemali ngaphandle kwemali yelizwe lakwaMthengi, nayiphi na utshintsho kwizinga lokutshintshisana ingaba nemiphumo emibi kwixabiso layo, intengo kunye nokusebenza.
Isixhobo seMali kwiimarike zangaphandle singabangela ubungozi obuhlukile kwimingcipheko yeemarike kwilizwe lakwaMthengi. Kwezinye iimeko, le mingcipheko ingaba enkulu. Ithemba lokufumana inzuzo okanye ukulahleka kwiintengiso kwiimarike zangaphandle lichaphazelekayo ngokutshintsha kwezinga lokutshintsha.
I-Instrument Financial Financial Instrument (okokukhetha, ikusasa, phambili, utshintsho, i-CFD, i-NDF) ingaba yintengiselwano yokungahambisi ukunikezela ithuba lokufumana inzuzo kwiinguqu zemali, iimpahla, iintengiso zamasheya okanye amanani ekwabelwana ngokuthi i-underlying instrument . Ixabiso leCandelo eliPhezulu lezeMali lingathintela ngqo kwixabiso lokhuseleko okanye nayiphi na into esetyenziswayo into enokufunyanwa.
Izithenkethi ezithembekileyo / iimarike zinokungazinzi kakhulu. Amanani e-Instrument Financial Instruments, kuquka ii-CFD, kunye ne-asethi kunye nama-Indices angashintsha ngokukhawuleza kwaye angabonakalisa imicimbi engabonakaliyo okanye utshintsho kwiimeko, akukho nanye inokulawulwa yiKlayenti okanye iNkampani.
Amanani ama-CFD aya kutshitshiswa, phakathi kwezinye izinto, ukutshintsha ukunikezelwa kunye nokufuna ubudlelwane, urhulumente, iinkqubo zorhwebo, ezoshishino kunye neenkqubo zorhwebo, imicimbi yezopolitiko kunye nezoqoqosho nakwihlabathi jikelele kunye neendawo ezibonakalayo zengqondo kwiindawo ezithengileyo.
I-Client akufanele ithenge i-Instrument Financial Instrument ngaphandle kokuba izimisele ukwenza ingozi yokulahlekelwa ngokupheleleyo yonke imali ayithele yona kunye nazo zonke iikomishoni ezongezelelweyo kunye nezinye iindleko ezenziweyo.
Ngaphantsi kweemeko ezithile zeemarike kunokuba nzima okanye akunakwenzeka ukwenza umyalelo
Ukubeka imiyalelo yokulahlekelwa kweMihlaba yokuPhumela kweMihlaba yokuSebenza iyanciphisa ilahleko zakho. Nangona kunjalo, phantsi kweemeko ezithile zeemarike ukuphunyezwa kwe-Stop Loss Order kungaba kubi ngaphezu kwexabiso elichazweyo kwaye ilahleko ezifikelekileyo zinokuba zikhulu kunokuba zilindeleke.
Ukuba umda we-margin awufaneleki ukubamba izikhundla ezivulekileyo ezikhoyo, unokubizwa ukuba ubeke imali eyongezelelweyo kwisaziso esifutshane okanye ukunciphisa ukutyhila. Ukungaphumeleli ukwenza oko ngexesha elifunekayo kunokubangela ukuhluthwa kwezikhundla ekulahlekelweni kwaye uya kuba noxanduva malunga nantoni na.
Ibhanki okanye uMthengisi ojongene naye kwiinkampani unokuba neenjongo ezichasene neemfuno zakho.
Ukungeniswa kweNkampani okanye iBhanki okanye i-Broker esetyenziswe yiNkampani ukwenza ukuthengiselana kwayo inokubangela ukuba izikhundla zakho zivaliwe ngaphandle kwezifiso zakho.
Ingqwalasela yabathengi ibhekiswe kwiingxowa-mali ezithengiswa ngokungaqhelekanga okanye ngokungapheliyo ukuba ayiqiniseki ukuba ixabiso liyakucatshulwa ngamaxesha onke okanye nokuba kunzima ukuvelisa intengo kwixabiso elingacatshulwa ngenxa yokungabikho kwe-counter iqela.
Ukurhweba ngomgca, kungakhathaliseki ukuba kulungele okanye kusebenza kakuhle, akuthethi ukunciphisa ingozi ehambelana nokuthengiswa kwemali
Kukho umngcipheko wokuba iincwadi zabaThengi kwiiMpahla zeMali zibe okanye zibe phantsi kwentela kunye / okanye nayiphi na enye imisebenzi ngenxa yenguqu kwimithetho okanye kwiimeko zakhe. I Nkampani ayifuni ukuba akukho rhafu kunye / okanye nayiphi na enye inxaxheba yesitampu iya kuhlawulwa. Umxhasi kufuneka abe noxanduva lwerhafu kunye / okanye nayiphi na enye imisebenzi engayifumana ngokuphathelele kwimisebenzi yakhe.
Ngaphambi kokuba uMthengi aqale ukuthengisa, kufuneka afumane iinkcukacha zazo zonke iikomishoni kunye nezinye iindleko apho uMthengi uya kuba noxanduva. Ukuba kukho naziphi na iirhafu ezingabonakaliswa ngemimiselo yemali (kodwa umzekelo njengokusasazeka kokusingatha), iKlayenti kufuneka icele inkcazo ebhaliweyo, kubandakanywa imizekelo efanelekileyo, ukuseka ukuba zeziphi iindleko zingathetha kwimimiselo ethile yemali
Ikampani ayiyi kunika iKlayenti ngcebiso malunga notyalo-mali okanye ukuthengiselana okunokwenzeka kwintengiso okanye ukwenza iingcebiso zentengiso yeliphi na uhlobo
Inkampani inokufuneka ukuba ibambe imali yeKlayenti kwi-akhawunti ehlukaniswe kwabanye abaklayenti kunye nemali yeNkampani ngokuhambelana nemimiselo yangoku, kodwa oku akunako ukufumana ukukhuselwa ngokupheleleyo
Ukuthengiselana kwi-Platform ye-Intanethi kuqhuba ingozi
Ukuba iKlayenti yenza intsebenziswano kwinkqubo yekhompyutheni, iya kubonakaliswa engozini ehambelana nenkqubo kubandakanyeka kwezinto zokusebenza kunye ne-software (i-intanethi / i-Servers). Isiphumo saloo naluphi na ukungaphumeleli kwenkqubo kungenzeka ukuba umyalelo wakhe awunakwenziwa ngokulandela imiyalelo yakhe okanye ayikwenziwanga nhlobo. I Nkampani ayamkeli nayiphi na uxanduva kwimeko yokungaphumeleli
Ingxoxo yefoni ingabhalwa, kwaye uya kwamkela ukurekhodwa okunjalo njengobungqina obuqinileyo kunye nobungqina bemiyalelo
Esi saziso asikwazi kwaye asichazi okanye sichaze yonke ingozi kunye neminye imiba ebalulekileyo echaphazelekayo ekusebenzeni kuzo zonke izixhobo zeMali kunye noTyalo-mali.